Allgedo.com » Duqa Magaalada Muqdisho Tarsan oo sheegay inuusan daacad u ahayn madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif ama Xasan Sheekh Maxamuud toona (Dhageyso)
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, December 4, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamrrd Axmed Nuur Tarzan ayaa waxaa wareysi gaar ah la yeelatay BBC-da Laanta afka Soomaaliya, waxaana uu kaga hadlay arimo dhowr ah.
Maxamuud Axmed Nuur Tarzan ayaa la weydiiyay Su’aal ahayd in uu Saaxiib dhow la ahaa Madaxweynihii Dowlada KMG Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed, waxaana uu yiri sidan.
“Aniga waajib bay igu tahay in madaxweyne kasta oo si doorasho ah ku yimaada in aan u dhawaado lana shaqeeyo, laakiin si gaar ah daacad uguma aheyn Shariiif Sh. Axmed, Xassan Sheekh Maxamuudna u noqonmaayo, hasa yeeshee Shaqadeyda ayaan daacad u ahay”.
Tarzan ayaa sidoo kale la weydiiyay xubinimadii Baarlamaanka ee uu ka tagay, wuxuuna sheegay in Xildhibaan uusan qaban karin xil kale marka laga reebo Wasiir, isaguna wuxuu sheegay inuu taasi uga tagay xilkiisa xildhibaanimo.
Marki uu madaxweyne Noqday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Tarzan waxaa soo koray culeys , kaasoo ah in xilka laga tuurayo, balse madaxweynihii hore ee DKMG Soomaaliya Shariif ayaa dhex dhexaadin u sameeyay madaxweynaha iyo gudoomiyaha Gobolka.
Warar hoose oo waxaa jira sheegaya in la kala qaadi doono labada xil ee uu isku hayo Tarzan kuwaasoo kala ah Gudoomiyaha Gobolka iyo Duqa Muqdisho, waxaana xilka Duqa Muqdisho lagu wadaa in xilkaasi loo dhiibo ruux kale.